इटालीविरुद्ध स्पेनः को जित्ला ? « रिपोर्टर्स नेपाल
इटालीविरुद्ध स्पेनः को जित्ला ?
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार
समाचार विश्लेषण । विश्वकप जितिसकेका फुटबलका दुई महाशक्ति इटाली र स्पेनबीच युरोकपको सेमिफाइनल प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । दुवै टोली उत्कृष्ट लयमा रहेकाले कस्ले जित्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ ।
फिफा वरियतामा स्पेन छैठौं र इटाली सातौं नम्बरमा छन् । यसकारण पनि दुई टोलीको स्तरमा खासै फरक छैन । तर, खेल्ने शैली भने निकै फरक छ ।
स्पेनका खेलाडी बल आफ्नै पक्षमा मात्र पारिरहने गरी खेल्छन् । उनीहरु मिलाउँदै लगेर विपक्षीको पोष्टमा आक्रमण गर्न नहतारिइकन प्रयास गर्छन् । तर, इटाली आक्रामक फुटबल खेल्छ । बल आफ्नो पक्षमा पार्नेभन्दा विपक्षीको पोष्टमा आक्रमण गर्न हतारिन्छन् ।
इटाली ४ पटक विश्वकप विजेता राष्ट्र हो । सन् १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा इटालीले विश्वकप जितेको छ । त्यसैले फुटबलमा इटालीको गर्वलायक इतिहास छ । तर, गत विश्वकपमा इटाली छनोट नै भएन । सन् २०१० र २०१४ को विश्वकपमा समूह चरणबाटै बाहिरियो । तर, यसपटक रोबर्टो मान्सिनीबाट प्रशिक्षित इटाली बलियो भएको छ ।
स्पेन सन् २०१० को विश्वकप विजेता हो । स्पेनमा व्यवसायिक फुटबल निकै चलेको छ । त्यहाँ राम्रा खेलाडीको उदय हुने गरेको छ । सन् २०१४ र २०१८ को विश्वकपमा स्पेनको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । अहिले उसको खेल सुधारिएको छ ।
स्पेनले युरोकपको सेमिफाइनल यात्रा तय गर्न स्वीजरल्यान्डमाथि कठिन जीत हासिल गरेको हो । निर्धारित समयमा ११ को बराबरीपछि अतिरिक्त समयमा पनि गोल नभएपछि पेनाल्टी सुटआउनमा ३१ ले जितेको हो । अन्तिम १६ मा क्रोएशियामाथि ५३ को जीत हासिल गरेको थियो ।
इटालीले क्वाटरफाइनलमा फिफा वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेको बेल्जियममाथि २१ को जीत निकालेको थियो । बेल्जियमलाई जितेपछि इटाली झन् उत्साही भएको छ । अन्तिम १६ मा अष्ट्रियामाथि २१ को जीत निकालेको थियो ।
इतिहास इटालीको पक्षमा छ । उसले ४ पटक विश्वकप जितेको छ भने स्पेनले एक पटक मात्र जितेको छ । तर, अघिल्ला विश्वकपको नतिजा हेर्दा दुवैको खेल खस्किएको छ । युरोकपमा भने दुवै टोलीले सशक्त प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
इटालीको टिम वर्क राम्रो छ । ३६ वर्षीय भेट्रान रक्षक चियलिनी, अग्रपंक्तिबाट खेल्ने इन्सिग्ने र भेराटीका अलावा अलराउन्डर खेल्न सक्ने मिडफिल्डर जर्गिनो जस्ता खेलाडी छन् ।
स्पेनसँग नाम चलेका खेलाडी छन् । बस्किट्स, टोरेज, मोराटा, गार्सिया जस्ता सशक्त खेलाडी छन् । लुइस इन्रिक जस्ता अनुभवी प्रशिक्षकबाट स्पेन उत्साही छ ।
यसरी हेर्दा दुवै देशबीचको सेमिफाइनल प्रतिष्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ । कुनैपनि मौका चुकाउँदा पनि यी दुई टोलीलाई भारी पर्न सक्छ ।
काठमाडौं, १८ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद
माधव नेपाल जननेता हुनुभयो, प्रधानमन्त्री देउवाको हाईट बढेको छ : महेन्द्र यादव
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले नेकपा (एमाले) का
लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नसक्ने, गठबन्धनले बुझाए मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि निवेदन
काठमाडौं, १८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नसक्ने भएको छ । सरकार
श्रेष्ठ र महराको कारण प्रचण्ड तनाबमा
काठमाडौं, १८ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम चयन गर्न सकेको
हेमन्त बुढाथोकी : योगप्रकाश मल्लको मृत्युपछि पाटनका छ प्रधान/काजीहरुले राजा योगनरेन्द्र मल्लको भान्जी पुण्यवतीकी छोरा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित्, मन्त्री छान्नै सकस
काठमाडौं, १८ साउन । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित् भएको
माधव नेपाल अलमलिएपछि बामदेव असन्तुष्ट
काठमाडौं, १८ साउन । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम सहभागी हुन थालेका